Igwe ihe nkuku, dị mma maka ịcha na ịkpụ osisi, arịa ụlọ, profaịlụ aluminom na okpokoro ụzọ, ma nwee ike chepụta ụkpụrụ na ụkpụrụ dị iche iche dị ka akụkụ gbakọọ. Ọ nwere ike ime ka ihe nrụgharị arụ ọrụ na -arụ ọrụ nke ọma n'oge ịcha. Akụkụ kasịnụ nke ngwaahịa a bụ na ọ nwere ihe mkpuchi alloy, nke nwere ogo 45 na kọntaktị na etiti ahụ. Mgbe ọ batara na ịkpụ nke okpokolo agba ọhụrụ, ọ gaghị apịa osisi ahụ. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ dị mfe ịpịa mbepụ ahụ, na -eme ka mbepụ ahụ adịghị mma, emechiekwa akụkụ ya.
Nlereanya NCM-45 Celsius
Isi ike 5.5kw
Ebumnuche bụ isi Ọkpụkpụ ọkpọkọ hydraulic nwere akụkụ 45 Celsius maka etiti ụzọ
Oke nha 1950 * 1100 * 1700mm
* Uru ngwaahịa
1. Ogwe triangle
Ogwe aka na-agbagharị agbago ihu nwere ogo 45 na-agbakwụnye usoro gantry gbara ọkpụrụkpụ, na ogwe aka ịgbatị agbatị na-eme ka ịcha nha buru ibu, ọsọ ịwa ahụ dị ngwa ngwa, na idobe ya siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghịkwa mfe ịkwaga.
2. Nkenke ịgbachi nkịtị
Bubata mkpụrụ osisi na-ebubata ihe dị elu + teknụzụ ịkpụpụta nke onwe ya na-ebelata oke mkpọtụ na usoro ịkpụ, na mmetụta mbepụ enweghị ntụpọ na mbepụ ihu.
3. Ịkwado efere nkwụnye eletrọniki
Anyị na -ewere ịdịna nka dị ka ụkpụrụ, ndị ọzọ na -ebelata ọnụ ahịa ya. Anyị agaghị eji akpachapụ anya mee ya. Usoro ọ bụla anyị na -eme bụ ihe achọrọ nke ọma, na -agba mbọ maka izu oke, na -aga n'ihu n'ihu, ma na -agba mbọ ka mma.
4. Ihe mgbochi mgbochi ihe
ọ na-eji ngọngọ ihe nrụgide polyurethane dị mma yana enweghị ntụpọ, na-agbanwe ma na-agbanwe, ọ dịghị mfe imebi ihe ahụ, ọ gaghị emebi elu ihe ahụ.
Nke gara aga: Fire window etiti igwe
Osote: Ifuru etiti igwe
Agba ntekwasa etiti igwe nzukọ akara akụrụngwa
Mmepụta akara nke nkịtị na -emeghe leveling mac ...